Global Voices teny Malagasy » Shina : Ny Fiantohana Amin’ny Setroka, Vahaolana Farany Amin’ny Fahalotoan’ny Rivotra iainana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Avrily 2014 11:01 GMT 1	 · Mpanoratra Owen Guo Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Mba mampahazo aina kely ireo mponina, any Shina, izay miaina matetika amin'ny fitombon'ny fahalotoan'ny rivotra iainana ny fitaovana fanadiovan-drivotra sy ny fitondrana tampim-bava. Amin'izao fotoana izao, ho fanampiana ireo mponina hiady amin'ny fanapoizinan'ny rivotra, ny orinasam-piatohana Ping An an'ny fanjakana dia mampanantena fa handoa onitra ho an'ireo mandoa saram-piantohana raha toa ka mihoatra ny fetra napetraka ny tondron'ny fahalotoana.
Nandrakotra an'i Beijing ny zavona matevina tamin'ny Janoary .Sary avy amin'i Owen.
Mikendry ny mpivezivezy sy ny mponina aminà tanàna fito ny fiantohana amin'ny setroka izay voalohany amin'ity karazany ity. Ao anatin'izany Beijing sy Shijiazhuang, izay niaina tao anatin'io fahalotoan'ny rivotra iainana io nandritra ny taona maro.
Mety handray onitra hatramin'ny 1500 yuan ( manodidina ny 240 dolara Amerikana), arakaraky ny fifanarahana, ireo nandoa saram-piantohana any Beijing raha toa ka niditra hopitaly noho ny fahalotoan'ny rivotra iainana izy. Raha toa ka mihoatra ny 300 ny tondron'ny kalitaon'ny rivotra (AQI), any Beijing, mandritra ny dimy andro misesy – haavo heverina fa mety hitera-doza- dia mety handray  300 yuan ( eo ho eo amin'ny 48 dolara amerikana) ireo mpividy antoka. Mandrefy ireo kasinga mpandoto toy ny singa madinika sy ny diôksidanà solifara ny AQI.
Misy fanaraha-maso maimaim-poana ny havokavoka sy fitiliana ORL rehefa mihoatra ny 300 mandritra ny fito andro ny AQI. Nanambara tamim-pireharehana tao amin'ny tranonkalany ilay orinasa fa raha toa ka miha-ratsy ny AQI , dia omena tapakila maimaim-poana ho any Hainan, nosy tropikaly mazàna antsoina hoe Hawaii-n'i Shina mba “hanadio ny havokavony” ireo mpandoa saram-piantohana.
Herinandro vitsivitsy taorian’ny nilazan'ny  mpitondra Shinoa fa tanàna telo ihany any Shina no manana kalitaon-drivotra iainana manara-penitra io fanambarana momba ny fifanaraham-piantohana io.
Nasongadin’ny Piraiministra Li Keqiang tamin’ny lahateniny fanokanana ny Kongresy nasionalim-bahoaka, fiantso ny parlemanta Shinoa, tamin’ity taona ity ny halehiben’ny fandotoana ny rivotra iainana izay namakiany  ny ady amin’ny fandotoana ny rivotra iainana.
Namaly io fiantohana io tamim-pahamalinana ny ankamaroan'ny Shinoa.
Nametra-panontaniana ao amin'ilay sehatra malaza fitorahana bilaogy madinika, Sina Weibo, i Bingren Kemiluon
Inoako fa tsy ho fampandriana adrisa fotsiny izany.
Izao no nosoratan'i  Shen Pinglunyuan:
Ahoana no ahafahantsika mamaritra raha avy amin'ny zavona matevina [ireo aretina sasany] ? Tsy maintsy ho be ny fifanoheran-kevitra ao, tsy ho mora ny hahazo fanonerana.
Tsy resy lahatra amin'io hevitra io mihitsy raha i “70s version Xu Wenqiang“  :
Natao izao mba hisintonana ny sain'ny olona, afaka mahita làlana hafa misy rivotra madio ny [mpizaha tany].
Nanoratra i  “Nuli Caishi Wangdao 1997″
Raha toa ka misy ny antoka tahaka izany ary tsy lafo, dia mety ho liana amin'izany aho. Sady izao koa e, afaka mividy antoka isika ho an'ny fahasalamantsika.
Toy izao kosa ny hevitr'i “Forever_RickyQ ” :
Fampandriana adrisa ataon'ny tranom-piantohana fotsiny izany. Hahavita hisoroka ny fahasahiranana tokoa ve isika raha toa ka mividy ny fiantohana amin'ny setroka ? Manasitrana ny endrika ivelany fotsiny io fa tsy ny fototr'aretina. Ny fifehezana ny loton'ny rivotra iainana ihany no fanalahidy. Endrika ivelany fotsiny ihany ny nanajanonana ny fampianarana nandritra ny andro nahabe setroka ny rivotra iainana. Ny fandavan-tenan'ny fitondrana hanome hery bebe kokoa amin'ny fifehezana ny loto no mety hahazoantsika tontolo iainana mendrika kokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/04/01/58707/
 mampanantena : http://about.pingan.com/pinganxinwen/1395125960371.shtml
 Nametra-panontaniana : http://weibo.com/1621370431/ABJZRq37B
 nosoratan'i : http://weibo.com/2267147875/ABH4zcuZ0
 Tsy resy lahatra : http://weibo.com/u/2096499082
 Nanoratra i : http://weibo.com/u/3646370980